Nanangana ny ambaratongam-pahefana ho an'ny mpanjifanay WordPress marobe izahay, ary iray amin'ireo zavatra ezahinay hatao ny mandamina tsara ny fampahalalana. Mba hanaovana izany dia matetika no te-hamorona pejy master izahay ary hampiditra menio izay mitanisa ireo pejy rehetra eo ambaniny. Lisitry ny pejin-jaza, na zana-pejy. Mampalahelo fa tsy misy fiasa na endri-javatra voajanahary hanaovana an'io ao amin'ny WordPress, ka dia nanamboatra a Kaody fohy Subpages ao amin'ny lisitra WordPress ampidirina ao amin'ny rakitra fonosana fonosin'ny lohahevitra ho an'ny mpanjifa.
aclass - Raha te hampihatra kilasy ao anaty lisitra tsy voahitsy ianao dia ampidiro eto.
ifempty - Raha tsy misy pejin-jaza dia azonao atao ny mampiditra lahatsoratra. Mety ho mora ampiasaina izany raha toa ka lisitry ny fisokafana asa… azonao atao ny mampiditra ny “Tsy misy fisokafana ankehitriny.”
afa-po - Ity ny atiny aseho eo alohan'ny lisitra tsy voafehy.